China china Kiln-Muchinjikwa chikamu chepasi peiyo fekitori uye vagadziri | Judha
Judha huni -200T / D 3 chigadzirwa ...
Judha Kiln-Inner Mongolia 30 ...
Judha huni -300T / D productio ...
Judha kiln - zana matani / ...
Judha Kiln-Muchinjikwa chikamu che ...
Judha Kiln-Muchinjikwa chikamu chepasi pezira
Kuita kwepamusoro kwemidziyo
(1) Kugadzirwa kwemazuva ese (kusvika matani mazana matatu pazuva);
(2) Yakakwira chigadzirwa chiitiko (inosvika 260 ~ 320 ml)
(3) Kupisa kwakaderera (-10 muzana;)
(4) Yakagadzika calcium oxide zvemukati (CaO≥90 muzana);
(5) Kushanda mashandiro uye kutonga mumoto (hapana kupomba, hapana kutsauka, hapana kubvaruka, hapana chiravira, kugadzikana kwekugara kwemarasha muvira);
(6) Kuderedzwa muhuwandu hwerime rinodyiwa nechigadzirwa mushure mekushandiswa neiyo bhizinesi (30 muzana yekugadzira simbi, desulphurization uye slagging, 25 muzana ye calcium hydrogen phosphate kugadzirwa, 20 muzana kugadzirwa kwe ferroalloy uye 20 muzana ye calcium Carbide alumina kugadzirwa);
(7) Yakakura goho pauniti chigadzirwa mushure mekugadzira simbi (chigadzirwa goho chinogona kuwedzerwa neinopfuura 1%);
(8) Kushatiswa kwekusviba (So2 emissions pazasi peanodzora nyika);
(9) Anoshandiswa marara, senge marara gasi uye mamwe marara.
Kugadzirwa kwemaitiro maitiro:
1) mhando yevira inonzwisisika, uchishandisa vase yemukati chimiro. Iyi dhizaini inoita yunifomu yekuparadzira mweya uye izvo zvinhu zvinopisa zvakaenzana, izvo zvisiri izvo chete zvinoita kuti yunifomu iderere yezvinhu, asiwo nekuenderera kuri kuwedzera kwenzvimbo yemuchinjikwa-inoenderana, iyo inobatsira kuchinjana kupisa pakati pegesi uye izvo zvinhu, uye inopa kutamba kuzere kune preheating mhedzisiro yemweya wedombo padombo. Deredza kupisa kurasikirwa. Iko kuchinjika kwehusiku hwemuviri dhayamita kunobatsira kuchipisa preheating, kupisa moto uye kupisa kwesimba kushandiswa, kukurumidza lime kukora, nekudaro kudzikisa kushandiswa kwemafuta, kutonhodza lime zvizere, kudzikisira tembiricha yedota uye kupora kupisa simba. Deredza kushandiswa kwesimba.
2), chirevo chemhepo chinogamuchirwa, chikamu chepazasi chinomanikidzwa neanofuridza, chikamu chepamusoro chine annular flue uye giravhiti inertial guruva muteresi, uye iyo inofarirwa fan uye chimney simba anoshandiswa, ayo asiri chete anobatsira kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye kubviswa kweguruva, asi zvakare zvinobatsira kuwedzera mweya vhoriyamu uye zvinobuda.
3) kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza inoshanda lime lime yezvigadzirwa zviri nyore uye zvakavimbika, hupenyu hwakareba, yakaderera kugadzirwa uye yekugadzirisa mitengo.
H 24h） Kugona
100-150t, 200-250t, 300-350t
Anthracite, 2-4cm, kukosha kwakakosha kupfuura 6800 kcal / kg
125-130 kg yakajairika marasha e1 ton lime
Simbi yekunze yesimbi uye firebrick lining
Bhandi rinotakura rine hood
Marasha uye lime dombo kugovera
Dutu kubvisa guruva + mizhinji-pombi redhiyeta + bhegi-mhando guruva kubviswa + mvura firimu desulfurization guruva kubviswa
Zvizere otomatiki makomputa kutonga
1 chirongwa chinodzora opareta;
1 huni tekinoroji;
1 mushandi wekuchengetedza;
1 mutyairi mutyairi
120-150 anoshanda mazuva ekushanda
Pashure: Juda Calcium hydroxide yekugadzira mutsara (ine slag kubuda system) -EPC Project
Zvadaro: Kiln Muviri Simbi Gungano
Vertical Lime Kiln Dhizaini
Vertical Lime Kiln Midziyo
Vertical Shaft Lime Kiln Vagadziri
Vertical Shaft Lime Kiln Kudyara
Fastigiate Lime Kuburitsa Muchina
9. ash system Iyo musimboti wesikuru koni dota inobvisa ndeyeshongwe-yakaumbwa yakatenderera vertebral tray ine hood inotsigirwa pane yekukweva. Rumwe rutivi rwetray rwakagadzirwa nechabuditsa chinokwenenzvera. Iyo mota uye yekudzora inotyairwa nebhevel giya kutenderera tireyi. Cone madota ekudzikisa muchina ane mukana weyunifomu kubuditsa chikamu chese cheiyo shaft kiln, uye ine imwe yekuwedzera uye yekupwanya kugona kune dzimwe nguva lime rajuru, saka iyo yemukati dhayamita inoshandiswa mu4,5 m-5.3m lime ...
Judha kiln - zana matani / zuva rekugadzira proce ...
Kukosha kweKuvandudza Nyowani Yemazuva Ano Lime Kiln Technology Lime ndiyo yakakosha uye yakakosha zvinhu zvekubatsira kwesimbi kugadzirwa, calcium carbide kugadzirwa, Refractory kugadzirwa, alumina kugadzirwa. Kunyanya munguva itsva, tekinoroji nyowani, zvigadzirwa zvitsva zvinoramba zvichikura zvigadzirwa zvecalcium zvakanyanya uye zvakanyanya kushandiswa zvakanyanya. Kudzidzira kwakaratidza kuti yemazuva ano lime kiln tekinoroji zvirokwazvo ndeyechokwadi chaizvo uye ipfupi nzira inobatsira yakajeka nzvimbo yesimbi nesimbi mabhizinesi, calcium carbide mabhizinesi ...
Iyo Yekuchengetedza System Gungano
10. Nzvimbo dzekuchengetera dzimba Lime rakapedzisa chigadzirwa bin gungano: yakawanda bhaketi chitakuriso, upfu isina musono chubhu, yakatenderera silo, yekupeta masitepisi, inodzivirira matusi, hydraulic madota kubuda dhizaini 1. simbi mamiriro: kusanganisira manera, girafu, kurodha pombi, chengetedzo vharafu, danho geji, kuburitsa vharuvhu, guruva muteresi, nezvimwe. 2. guruva rinotora mudziyo: iyo pini bin inofanira kugadziridzwa mukuita kwekushandisa. Kusashanda zvakanaka kunogona kukonzera kuputika. Musoro wetangi wakagadzirwa nemagetsi guruva muteresi, ...
Judha Kiln-Round ndiro mana-mativi anosunungura
9. madota system Yechina-mativi madota ekudzikisa muchina kuburitsa iroime mumuviri wemoto zvakaenzana uye zvakarongeka mumadota anoburitsa hopper, uye iyo lime iri mubhakiti inoburitswa kunze kweiyo hovhoni kuburikidza nemaviri mavharuvhu. Iwo-mativi madota ekudzikisa michina ina akapatsanurwa madota ekudzikisa maturusi, anoenderana uye akazvimirira. Unyanzvi hunhu hwe ina-mativi madota ekudzikisa michina: 1. iyo yakanyatso kusimbiswa chimiro chakaumbwa ne ina-mativi madota kubuda mudziyo uye bhero ...
Judha Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 nharaunda ...
Unyanzvi parameter uye tafura yekuita Nha. Zviri Mukati Parameter 01 - 24h, Kugona 100-150t, 200-250t, 300-350t 02 Nzvimbo inogarwa 3000-6000sq.m 03 Hurefu hwese 40-55M 04 Kureba Kunobudirira 28-36M 05 Hupamhi hwekunze 7.5- 9M 06 Mukati dhayamita 3.5-6.5M 07 Kupisa tembiricha 1100 ℃ -1150 ℃ 08 Kupfura nguva Kutenderera 09 Fuel Anthracite, 2-4cm, calorific kukosha kwakanyanya kupfuura 6800 kcal / kg 10 kushandiswa kwemarasha 1 ...
Otomatiki kudzora gungano
Otomatiki ekudzora system Kubva kumagetsi batching, kusimudza, otomatiki kugovera, kupisa tembiricha, mweya kumanikidza, calcining, lime kukanda, kutumira, ese akagamuchirwa makomputa ekudzora system, akasanganiswa nevanhu-muchina interface sisitimu yekudzora system uye yakajairika komputa yekudzora system. inowanikwa uye nzvimbo synchronous oparesheni, pane yekare chime yezvidhinha kuponesa anopfuura 50% vevashandi, zvikuru kuvandudza kugadzirwa kunyatsoshanda, kuderedza basa kusimba, kuvandudza wor ...
Industrial Park, Linyi Economic Development Zone, Shandong dunhu, China
Kushambadzira Manager: Ella + 8615866201119 technical Manager: Allen +8613953913090
Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Kugadzira Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Equipment,